नर्सिङ संघ निर्वाचन : २१ वटै केन्द्रमा मतदान सम्पन्न, केही समयमै मतगणना सुरु हुने – Health Post Nepal
२०७६ पुष ९ गते १९:१७
नेपाल नर्सिङ संघको नयाँ नेतृत्वका लागि देशभरका २१ मतदानस्थलमार्फत मतदान सम्पन्न भएको छ । सबै मतदानकेन्द्रमा बुधबार बिहान ७ देखि बेलुकी ५ बजेसम्मका लागि मतदान समय तोकिएकोमा उत्साहजनक रूपमा मतदान सम्पन्न भएको संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले बताइन् ।
काठमाडौँ मतदानकेन्द्रमा २ हजार १ सय ७ मत खसेको पोखरेलले जानकारी दिइन् । देशका सबै केन्द्रमा कति–कति मत खस्यो भन्ने जानकारी आउन भने केही समय लाग्ने उनले बताइन् । ‘मतदान अधिकृतहरूले रिपोर्टिङ गरिसकेपछि मात्र कहाँ कति मत खस्यो भन्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि केही घण्टा लाग्छ ।’
बुधबार राति नै मतगणना सुरु हुने संघले जनाएको छ । ‘केही समयपछि मतगणना सुरु हुन्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भनिन् । सम्बन्धित मतदानकेन्द्रमै मतगणना गरेर रिपोर्ट केन्द्रमा पठाउने बताइएको छ ।
संघको यसपटकको निर्वाचनका लागि कुल १५ हजार १ सय ५९ मतदाता रहेको संघले जनाएको छ । करिब ९० हजार नर्स नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुँदा छाता संगठनमा १५ हजार मात्र मतदाता हुनुले संघले आफ्ना सदस्यको विश्वास जित्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, यसपटक अन्तिम समयमा आएर उल्लेख्य मात्रामा मतदाता बढेका थिए ।
निर्वाचनमा संघको अध्यक्षका लागि प्रगतिशील प्यानलबाट प्रा. मनकुमारी राईको प्रतिस्पर्धामा संयुक्त पेसागत प्यानलबाट प्रा. मुना राना थापा मैदानमा छिन् । यसअघि संघको नेतृत्वमा प्रगतिशील प्यानल (सत्तारूढ नेकपानिकट) कै एकछत्र वर्चश्व रहँदै आएको छ । हरेक ३ वर्षमा हुनुपर्ने संघको निर्वाचन २ वर्ष ढिलो गरी ५ वर्षपछि भएको हो ।